June 2012 | IT Sharing Network
USB ကနေအလွယ်တကူ windows တင်ဖို့ WintoBootic V1.2 (459.6KB)
အရင်တုန်းကလည်း ဒီနေရာလေးမှာ WinToFlash ကိုသုံးပြီး USB Drive ဖြင့် Window တင်နည်းလေးကို တင်ပေးဖူးပါတယ်... USB ကနေ၀င်းဒိုးတင်တဲ့ software တွေအများကြီးထဲကမှ ဒီကောင်လေးကတော့ အရမ်းလန်းတယ်ဗျာ... Install လုပ်စရာလည်းမလိုပါဘူး သုံးရတာအဆင်ပြေလွယ်ကူတဲ့အပြင် ဖိုင်ဆိုက်လည်းသေးလို့ ဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်... jumbofiles နှင့် mediafire လင့်နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်... ၀င်းဒိုးတင်နည်း စာအုပ် Windows Iinstallation Guide (XP ,7, Vista)- 4.32 MB ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်...
Phone အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေ download ဆွဲဖို့အတွက် နိုင်ငံခြား sites 21 ခု
Phone အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေ download ဆွဲဖို့အတွက် နိုင်ငံခြား sites 21 ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
System Spec 3.07 (2.2MB)
ပုံလေးကြည့်ယုံနဲ့ သိကြမှာပါ 28.6.2012 ကထွက်တာပါ Home Page ကိုနှိပ်ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ အသေးစိပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်....
System Spec 3.07 isautility application that lets you view, save and print out your system spec information be it hardware or software being used on your computer. With System Spec You will be able to find out more detailed information about CPU, drives, software, memory, network, Internet, CD / DVD drive, and various other information that you can know easily and quickly.
PDF editing software and Lightning PDF Professional 7.0.1 Full Version (29.9MB)
Lightning PDF Professional software for editing and converting PDF files and Adobe Acrobat software isagood alternative.Using the standard PDF files that you can make with just one click. Creating PDF files using software tools, integrated with Microsoft Office, making PDF files optimized for Windows and all software and standard PDF software, PDF will be applicable by all of the important features Lightning PDF Professional are be.
Photodex ProShow Producer 5.0.3256 (39.2MB)
Nite anythink all Photodex ProShow Producer 5.0.3256 With this application you can combine some or many images at once to be made inaslide show and text photo.increase some effect also has been provided, our taste for living in accordance with taste.at choose can also insert song to the slideshow looks alive.Photodex ProShow Producer 5.0.3256 can also be used to combine multiple pieces of video clips, you can as an easy way to makeapresentation just by drag n drop feature, and other features designed for user convenience. This software is almost the same function as Registry Repair Wizard 2012 Build 6.72
CCleaner 3.20.1750 Professional (3.7MB)
၀င်းဒိုး loader 2.1.5
Recovery Toolbox for CD (1.7 MB)
အသုံးပြုပုံ နမူနာပုံတွေလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်.... ဒီကောင်လေးလန်းသလားဆိုတာ နမူနာပုံလေးတွေသာ ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဗျို့... jumbofiles နှင့် mediafire ဒေါင်းလော့လင့်နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်....
The program allows you to recover files of any types. The tool completely scans disks and saves as much information as possible. During the recovery process, Recovery Toolbox for CD Free usesalot of different algorithms, which considerably increases the amount and quality of recovered data.
AusLogics BoostSpeed 5.3.0.0 (9.307MB)
မူရင်းဆိုက် Home Page ကို ကလစ်ပြီး အသေးစိပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ် ... သူရဲ့ Features တွေကိုလည်း အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် crack ဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ်... Patch and Crack အသုံးပြုနည်း မြန်မာလိုစာအုပ်ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်....
PC Optimizer Pro 6.2.6.6 (11.23MB)
နာမည်လေးဖတ်လိုက်ယုံနဲ့ သိကြမှာမို့ လေမရှည်တော့ပါဘူး သူရဲ့ Features တွေကို အောက်မှာ တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ... မူရင်းဆိုက်ကို www.pcoptimizerpro.com ကိုကလစ်ပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ်... Patch and Crack အသုံးပြုနည်း မြန်မာလိုစာအုပ်ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်....
License key of Kaspersky Products -24th june 2012
Kasparsky Internet Security 2012 (76.42MB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဒီမှာ ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်ပါတယ် ... kasparsky key ထည့်နည်း ဒီမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် ... ဆိုက်ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာလည်း တင်ပေးထားပါတယ် ... kasparsky ofline update လုပ်နည်း (မြန်မာ) 1.0 MB ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများနှင့် ယခုမှ စသုံးမည့် သူငယ်ချင်းများ ဒီမှာ kasparsky offline update ဖိုင် များကို ဒေါင်းလော့ဆွဲလို့ရပါတယ် ... software ပေါ်ကနေ update ဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ဆွဲလျှင် တော်တော်ကြာပါတယ် ... အခုမှစသုံးမည့် သူငယ်ချင်းများ IDM နှင့် update ဖိုင်ကို အရင်ဒေါင်းပြီးမှ update လုပ်ပါက ပိုအဆင်ပြေပါတယ် ... Kasparsky သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက update ဖိုင်ကို copy ကူးပြီးလုပ်လို့လဲရပါတယ်...
SpeedConnect Internet Accelerator 8.0 New Release (2.44MB)
SpeedConnect Internet Accelerator 8.0 ဒီကောင်လေးက အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကောင်းအောင် အထောက်အပံပေးနိုင်ပါတယ်... တော်တော်များများလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ကျွန်တော်လည်း ဒါလေးပဲသုံးဖြစ်ပါတယ်... အမြဲတန်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် crack ဖိုင်ပါပါတယ်... crack only ဆိုတဲ့ဖိုင်ထဲက crack ဖိုင်နှစ်ခုစလုံးကို ကော်ပီကူးပြီး ထည့်ပေးရပါမယ်... patch နှင့် crack ဖိုင်အသုံးပြုနည်း စာအုပ် Install Guide Patch and Crack Files (224.14KB) ကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းလော့ယူနိုင်ပါတယ်... အသေးစိပ်ကို သူရဲ့ မူရင်းဆိုက် Home Page ကိုနှိပ်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... jumbofiles နှင့် mediafire ဒေါင်းလော့လင့်နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်...
Hide Images Photo Locker v 1.0.0 for Android (1.24 MB)
Photo Locker images using their own software with high security and can easily hide from others.This software usesaPIN code will stay away from the others available.Ability to hide hundreds of files, folder lock feature, zoom images in your software, slide show feature in the software and many other features of this software is security
kasparsky ofline update လုပ်နည်း (မြန်မာ) 1.0 MB
kasparsky ofline update လုပ်တဲ့နည်း ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ...
minus နှင့် mediafire ဒေါင်းလော့လင့်နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်...
DLL-Files.com Fixer 2.7.72.2315 (3.8 MB)
ဒီကောင်လေးကို အားလုံးလည်းသိကြပြီးသားမို့ သူ့ရဲ့ Features တွေကိုပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
Facebook chat မှာ Facebook Smiles ပုံလေးတွေသုံးပြီးအလွယ်တကူ chat လို့ရတဲ့ Facebook Smiles 1.0 (2.5 MB)
Facebook chat မှာ Facebook Smiles ပုံလေးတွေသုံးပြီးအလွယ်တကူ chat လို့ရတဲ့ Facebook Smiles 1.0 လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ပုံလေးတွေလည်းလန်းသလို သုံးရတာလည်းအရမ်းလွယ်ပါတယ်... အောက်မှာလည်း နမူနာပုံလေးတွေထည့်ပေးထားပါတယ်... download မှရလာတဲ့ Facebook Smiles လေးကို ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ် install လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ.. ပေးထားတဲ့ပုံလေးတွေထဲက မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ ပုံကို ကလစ်တချက်နှိပ်ပြီး Facebook chat မှာ Ctrl+v (past) လုပ်ပြီး အသုံးပြုယုံပါပဲ... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလော့ယူသွားနိုင်ပါတယ်....
Avanquest PC Speed Maximizer 3.1.0.0 Portable | 2.3 MB
ကွန်ပြူတာမြန်ဆန်ကောင်းမွန်စေဖို့ အသုံးပြုတဲ့ speed up လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ software တစ်မျိုးပဲ ဒီကောင်လေးလည်းကောင်းတယ်ဗျ... Optimise registry, Delete privacy files, Fix invalid short cuts, Optimise Windows, Manage start up စတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ကွန်ပြူတာကို မြန်ဆန်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ်.. install လုပ်ပြီး patch ခြိုးတဲ့အခါမှာ internet နှင့် antivirus ကိုပိတ်ထားပေးရပါတယ်... စမ်းသုံးကြည့်သင့်တဲ့အထဲမှာ ဒီကောင်လေးလည်းပါလို့ အောက်ကလင့်မှာ download ယူထားစေလိုပါတယ်....
WebcamMax 7.6.4.8 (20.5 MB)
အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ WebcamMax 7.6.4.8 update လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အမြဲတန်းအမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် keygen + patch ဖိုင်ပါပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Microsoft Office မှာ PDF file အနေဖြင့် save လုပ်မယ် (938 KB)
Microsoft Office မှာ PDF file အနေဖြင့် save လုပ်လို့ရတဲ့ Microsoft save as or PDF add-in for 2007 Microdoft Office programs လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အောက်က နမူနာပုံလေးကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ...
Add 3D dimesnsion On Firefox (Fox Tab)
Firefox မှာ add ons 3D dimesnsion ထည့်သုံးလို့ရတဲ့လင့်ကလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... နမူနာပုံများကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်...
Update Freezer (2.34 MB)
မိမိစက်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ software တွေ update လုပ်မလားဆိုပြီး လာလာမေးနေတာကို ပိတ်ထားလို့ရတဲ့ Update Freezer လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အာရုံနောက်သက်သာတာပေါ့...
SQL Injection Attack (myanmar ebook) 2.4 MB
နည်းပညာစာအုပ်များကို တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ်ဆိုသလို ရေးသားပေးနေတဲ့ 3thic0kiddi3 မှရေးသားထားတာပါ... နည်းပညာလေ့လာနေသူများကို ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး စေတနာထားရေးသား မျှဝေပးနေသော 3thic0kiddi3 ကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ... နောင်လည်း ဒီ့ထက်မက ရေးသားမျှဝေနိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုများ အစဉ်ရရှိပါစေ... ဒီစာအုပ်ကလေးကို jumbofiles နှင့် mediafire လင့်နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်...
Windows Iinstallation Guide (XP ,7, Vista)- 4.32 MB
အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် လင့်သေနေပြီဆိုလို့ ကျွန်တော်မှာ ရှိတဲ့ စာအုပ်တွေ အကုန်ပေါင်းပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... XP ,7, Vista ၀င်းဒိုးတင်နည်း စာအုပ်4အုပ် စလုံးပေါင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာရှိတဲ့ သူတိုင်း ၀င်းဒိုးတင်တတ်ဖို့လိုပါတယ် ... ခက်လည်းမခက်ခဲပါဘူး စမ်းတင်ကြည့်ပေါ့ နောက်ဆုံးမရတော့မှ ဆိုင်သွားတင်ခိုင်းလည်းရတာပဲ.. ပျက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ရဲရဲသာကိုင်ကြပါ... ကိုယ်တိုင်တတ်သွားတဲ့အခါကျ ကွန်ပြူတာဆိုင်ကို အားကိုးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ အချိန်ကုန် အလုပ်ရှုပ်သက်သာပြီး ပညာတိုးပါတယ်... window တင်ပြီး မိမိသုံးနေကြ software တွေ အားလုံးတင်ပြီးတဲ့အခါ window ကို backup လုပ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ.. ၀င်းဒိုးသုံးရတာ လေးလာတာတို့ စိတ်ကြိုက်မဖြစ်တော့တာ error တစ်ခုခုတက်တာမျိုးစသည်ဖြင့် အကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့် Windows ပြန်မတက်တော့တဲ့ အခါမျိုးမှာ Windows ကို အသစ်က ပြန်တင်စရာမလိုပဲ... Repair CD ထည့်ပြီး Run လိုက်ရုံနဲ့ မိမိ backup လုပ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေအတိုင်း ပြန်တက်လာအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလေးပါ။ window7backup လုပ်နည်းလေးကို ဒီလင့်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်...ကျွန်တော်လည်း ၀င်းဒိုးတင်ပြီးတိုင်း ဒီနည်းလေးကိုသုံးပါတယ် ... ၀င်းဒိုးပြန်ပြန်တင်ရတာ ပျင်းတာရော အချိန်ကုန်တာရောကြောင့်ပါ... အခု ဒီစာအုပ် ၄ အုပ်ကို jumbofiles နှင့် mediafire လင့်နှစ်ခုဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...
YouTube မှ video တွေကို wepage က player နဲ့ မကြည့်ပဲ VLC player ပေါ်မှာကြည့်နည်း
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး wepage က player နဲ့ မကြည့်ပဲ ကိုယ်သုံးနေကြ player နဲ့ကြည့်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် YouTube မှ video တွေကို VLC player ပေါ်မှာကြည့်တဲ့နည်းလေးပါ...
Aiseesoft 3D Converter 6.3.6 (26MB)
ဒီ video converter လေးကို စမ်းကြည့်လို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အလွယ်တကူ 3D video ပြောင်းလို့ရပြီး သူရဲ့ Features တွေကိုလည်း အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ patch ဖိုင်ပါပါတယ်...
Adobe Photoshop CS6 Full Version (serial crack keygen only)
The newest version of "Adobe Photoshop CS6" software redefines digital imaging with breakthrough tools for photography editing, superior image selections, realistic painting, and more. And now, use it with creativityboosting mobile apps. Download Adobe Photoshop CS6 Keygen and crack software totally FREE and enjoy in your Full Version.
Random Access Memory (2.92 MB )
Random Access Memory အကြောင်း မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်...
ziddu မှ ဒေါင်းလော့ယူလို့အဆင်မပြေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် mediafire မှာ ထပ်တင်ပေးထားပါတယ်...
Winamp Pro.v5.63 Build 3234 (16.26MB)
ကျွန်တော်ကတော့ Music ဖွင့်တဲ့ player ထဲမှာ Winamp ကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ... ဒါလေးက update လေးဖြစ်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Winamp is one of the oldest and most powerful software sound and image of the past and had been assigned to many users through the functionality of the day is added to the users. This popular and powerful player who last hadalot of changes in terms of looks and sees what tremendous progress in terms of other features have been added. Nowanew version of Winamp, which provides additional support for almost all audio formats can also playarole player andavideo film to be screened.
License key of Kaspersky Products -21st june 2012
Kasparsky Internet Security 2012 မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဒီမှာ ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်ပါတယ် ... ဖိုက်ဆိုက် (76.42MB)
kasparsky key ထည့်နည်း ဒီမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် ... ဆိုက်ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာလည်း တင်ပေးထားပါတယ် ...
kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများနှင့် ယခုမှ စသုံးမည့် သူငယ်ချင်းများ ဒီမှာ update ဖိုင်များကို ဒေါင်းလော့ဆွဲလို့ရပါတယ် ... software ပေါ်ကနေ update ဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ဆွဲလျှင် တော်တော်ကြာပါတယ် ... အခုမှစသုံးမည့် သူငယ်ချင်းများ IDM နှင့် update ဖိုင်ကို အရင်ဒေါင်းပြီးမှ update လုပ်ပါက ပိုအဆင်ပြေပါတယ် ... Kasparsky သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက update ဖိုင်ကို copy ကူးပြီးလုပ်လို့လဲရပါတယ်...
PhotoInstrument 5.6 Build 565 (6.35 MB)
တင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ PhotoInstrument update လေးရလို့ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Xilisoft Online Video Converter 3.3.0.20120525 (21.43 MB)
အွန်လိုင်းက video တွေ download ပြီး ဖုန်းထဲထည့်ချင်တာတို့ MP4 ထဲထည့်ချင်တာတို့ စသည်ဖြင့် သုံးလို့ အဆင်ပြေမယ့် Xilisoft Online Video Converter ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အွန်လိုင်းက Video တွေကို download ဆွဲတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်...
Super Speed Internet & Broeser Assistant v1.31 Final (2.7MB)
Winzip courier v359658 full seria (10.1MB)
With state-of-the-art compression and encryption technology, Courier delivers the power of WinZip where it’s needed most—your email system! This easy-to-use tool seamlessly integrates with your email application to automatically zip and protect outgoing files as you work. Simply write your email, attach your files, and click Send—Courier does the rest!
* Does it take forever to send emails with large file attachments?
* Have you ever had emails bounce because their attachments exceeded server size limits?
* Worried that someone other than your intended recipients can access your email attachments?
* Did you know you can send files faster, more reliably, and more securely when they're zipped?
Photofiltre Studio x 1060 Full Activation (10.7MB)
ကြော်ငြာပုံလေးကြည့်မိပြီး စိတ်ဝင်စားသွားတာနဲ့ စမ်းကြည့်တာ မဆိုးဘူးဗျ... ဓါတ်ပုံလေးတွေကို စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်ဖို့ စမ်းသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အဆင်ပြေမယ့် software လေးပါ... သူရဲ့ feature တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်... photo သမားတွေ အတွက်တော့ အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်... ကိုယ့်ပုံကိုယ် ကလိကြည့်တာတော့ တော်တော်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်သွားတယ်... install လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Internet-download-manager-6.12-beta (4.33 MB)
အသစ်ထွက်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... Install လုပ်မယ်ဆိုရင် အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို ဖြုတ်ပစ်ရပါမယ် ... Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ် .... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ် ... မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်က Link မှာ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီဗျာ။ download လင့် သုံးနေရာ တင်ပေးထားပါတယ်... အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများနှင့် ယခုမှ စသုံးမည့် သူငယ်ချင်းများ ဒီမှာ update ဖိုင်များကို ဒေါင်းလော့ဆွဲလို့ရပါတယ် ... software ပေါ်ကနေ update ဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ဆွဲလျှင် တော်တော်ကြာပါတယ် ... အခုမှစသုံးမည့် သူငယ်ချင်းများ IDM နှင့် update ဖိုင်ကို အရင်ဒေါင်းပြီးမှ update လုပ်ပါက ပိုအဆင်ပြေပါတယ် ...
WinASO Registry Optimizer 4.7.7 + Patch (5.57 MB)
အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် ဒါလေးကတော့ update လေးရလို့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်... သေသေချာချာသုံးကြည့်တော့ တော်တော်ကောင်းမွန်တာတွေ့ရပါတယ်... ဒီကောင်လေးမှာ Cleaan Center, Optimize Center, Advanced Tools, System Imformation ဆိုပြီး အပိုင်းလေးပိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်... Cleaan Center မှာ Privacy cleaner, shortcuts clears, restore ဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလုပ်နိုင်ပြီး Optimize Center မှာ system optmizer, registry defrag တို့ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ် Advanced Tools မှာ Data Recover, IE Manager, Auto Shutdown, Startup Manger, Uninstall Manger, System Tools စသည်တို့ ပါဝင်ပါတယ်...နောက်တစ်ခုကတော့ System Imformation အပိုင်းပါ မိမိကွန်ပြူတာရဲ့ System Imformation ကို အလွယ်တကူကြည့်နိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုဖို့အတွက် patch နှစ်မျိုးနဲ့ Keygen ထည့်ပေးထားပါတယ် တစ်ခုအဆင်မပြေတစ်ခုသုံးလို့ရပါတယ်... winaso.registry.optimizer.4.7.6-patch ကို ကျွန်တော်စမ်းသုံးတာတော့ အဆင်ပြေပါတယ် ... ကျန်တာတော့မစမ်းရသေးပါဘူး... patch ခြိုးတဲ့အခါ နာမည်ကို ကြိုက်တဲ့နာမည်ထည့်လို့ရပါတယ်... ဒါလေးလည်းသုံးကြည့်သင့်တာလေးမို့ အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Angry Birds Seasons 2.4.1 + Patch (53.482 MB)
Angry Birds ကစားတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် အသစ်ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... Home page ကိုနှိပ်ပြီး မူရင်းဆိုက်ကိုသွားရောက်နိုင်ပါတယ်... software နှင့် Patch ကို download လင့်ခွဲတင်ပေးထားပါတယ်... software ကိုတော့မူရင်းလင့်ပဲပေးထားပါတယ် Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် patch ဖိုင် serial key ထည့်ပေးထားပါတယ် ... patch ခြိုးပြီးမှ serial key ထည့်ပေးရပါမယ်... Patch and Crack Files ဖိုင်အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... Angry Birds ကစားလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Desktop2Record 1.0 (1.9 MB)
ဒီကောင်လေးက free software ဖြစ်ပြီး ဖိုင်ဆိုက်သေးသေးလေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးလို့ရတဲ့ screen recorder ဖြစ်ပါတယ် ... အသုံးပြုပုံလည်း လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်... မိမိ ကွန်ပြူတာမှာ လုပ်ဆောင်သမျှကို video ဖိုင်အဖြစ်ဖမ်းယူထားလို့ရပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
7 Quick Fix 2.0 (915.3KB) / (1.44MB)
windows ရဲ့ Error ပေါင်း 108 မျိုးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်... သူရဲ့ Features တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်... ဖိုင်ဆိုက်ကလေးလည်းသေးပြီး အသုံးဝင်တာလေးမို့ ဒေါင်းလော့ယူထားစေလိုပါတယ်... win7အတွက်နဲ့ win xp နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် တင်ပေးထားပါတယ်...
win 8 မှာ win 7start menu ပုံစံလေးအသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Setp (1) Windows Key + R ကိုတွဲနှိပ်ပြီး Run box ကိုခေါ်ပါ။ regedit လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Registry Editor ကိုဖွင့်ပါ။
Step (2) HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Explorer အဲဒီအတိုင်း အဆင့်ဆင့် သွားလိုက်ပါ။
Hard Disk Sentinel Pro 4.00.11 Build 5237 Beta | 13.2 MB
ဒီကောင်လေးက နာမည်နဲ့လိုက်အောင် Hard Disk ကိုစောင့်ကြပ်စစ်ဆေးပေးမယ့် software ဖြစ်ပါတယ်... မိမိ Hard Disk ရဲ့ information နဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သိရှိထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အသုံးပြုလို့ရပါတယ် ... သူ့ရဲ့ features တွေကိုလည်းအောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Speedbit Video Accelerator 3.3.1.0 (3.2MB)
ဒီကောင်လေးက YouTube အပါအ၀င် video sites 165 မျိုးကို ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါ မြန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...
Open up the world of High Definition videos as HD Video Accelerator for YouTube lets you stream HD videos quickly with significantly reduced buffering times. You'll also download all your favorite iTunes content extremely fast.
License Keys of Kaspersky Products (1 year)
၀င်းဒိုး 8 Highly Compressed & Fully Activated 3.7 MB
၀င်းဒိုး ၈ ကိုချုံ့ထားတာလေးတွေ့လို့ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်...ဒေါင်းလော့မှရလာတဲ့ RAR ဖိုင်လေးကိုဖြည်လိုက်ရင် 3.12GB ရှိတဲ့ iso ဖိုင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်... rar password က 123456789 ဖြစ်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Wedding Album Maker Gold 3.50 Full Serial (24.3MB)
Wedding Photos တွေကို background music တွေ Pan&Zoom တွေနဲ့ transition effects တွေကို ထည့်သွင်းပြီး မိမိနှစ်သက်တဲ့ Music လေးတွေ Transition Effects လေးတွေနဲ့ Wedding Album လေးကို စိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်....
Wedding Album Maker Gold 3.50 Full Version - Dengan menggunakan program ini anda akan dapat dengan mudah membuat album foto digital pernikahan. Walaupun namanya Wedding Album Maker, tetapi anda juga dapat memanfaatkan software ini untuk membuat album foto digital di luar dari tema foto pernikahan. Untuk mengetahui apa saja yang dapat di lakukan software ini, anda bisa melihatnya pada info fitur Wedding Album Maker Gold 3.50 di bawah ini.
iphone/ipad ပျောက်ရင်၊အခိုးခံရရင် ... (ပြန်လည်မျှဝေခြင်း)
iphone/ipad/ipod ပျောက်ရင်၊အခိုးခံရရင် စိတ်မပှုပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်နေကျ James Bond (007) movie ထဲ ကလိုမျိုး ရန်သူဘယ်ရောက်နေပြီးလဲဆိုတာကို James Bond (007) က ပစ္စည်းလေးတခု ထည့်ပေး လိုက်တာနဲ့ မြေပုံမှာ ပြသလိုဘဲ။ အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Iphone/ipad, Ipod မှာ ရပါပြီး မနေ့ကဘဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူရဲ့ Iphone 4s ကို shopping centre မှာ ပျောက်သွားတာ နဲ့ ကျွန်တော်ကို ဖုန်းဆက်တယ် ဒါနဲ့ဘဲ ကျွန်တော်လဲ သူ့ရဲ့ Iphone မှာ သုံးတဲ့ Apple ID and password ကို အသုံးပြုပြီး
USB ကနေအလွယ်တကူ windows တင်ဖို့ WintoBootic V1.2 (...
Phone အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေ download ဆွဲဖို့အတွက် နိ...
PDF editing software and Lightning PDF Professiona...
SpeedConnect Internet Accelerator 8.0 New Release ...
Hide Images Photo Locker v 1.0.0 for Android (1.24...
Facebook chat မှာ Facebook Smiles ပုံလေးတွေသုံးပြီ...
Avanquest PC Speed Maximizer 3.1.0.0 Portable | 2....
Microsoft Office မှာ PDF file အနေဖြင့် save လုပ်မ...
YouTube မှ video တွေကို wepage က player နဲ့ မကြည့်...
Adobe Photoshop CS6 Full Version (serial crack k...
Xilisoft Online Video Converter 3.3.0.20120525 (21...
Super Speed Internet & Broeser Assistant v1.31 Fin...
Hard Disk Sentinel Pro 4.00.11 Build 5237 Beta | 1...
iphone/ipad ပျောက်ရင်၊အခိုးခံရရင် ... (ပြန်လည်မျှေ...
DiskTrix UltimateDefrag 4.0.96.0 | 11.58 MB
Naturpic Audio File Cutter 4.0 | 8.3 MB
virtualbox/4.1.16/VirtualBox-4.1.16-78094 (90.85 MB)
USB Lock Auto Protect 2.5.0 (1.5 MB)
Adobe Photoshop CS6 13.0 Final RePack (No Need CRACK)
Xilisoft DVD Ripper Ultimate 7.3.0 build 20120529 ...
Folder Lock 7.1.0 Final | 14.5 MB
AnyReader 3.2 Build 402 (3.9MB)
Zip Repair Pro for Windows 5.1.0.1417 | 10.3 MB
PC Auto Shutdown 5.18 | 1.09 MB
Video2Webcam 3.3.2.8 | 5.4 MB
Veronisoft IP Net Checker 1.4.8.1 (x86/x64) | 3.3 MB
Loic DDOS Tools (For Beginner) Loic DDOS Tools ကိ...
EximiousSoft Business Card Designer 3.70 | 11.7 MB
၀င်းဒိုး ၈ Loader v 2.7.4
MetaProducts Portable Offline Browser v6.3.3788 Mu...
Elcomsoft Distributed Password Recovery 2.97.311 |...
Angry Birds Space v1.2.0 (31.5MB)
USB Safely Remove 5.1.3.1186 Final | 7.16 MB
WinMend History Cleaner 1.4.1.0 | 2.3 MB
Wi-Fi လွှင့်နည်းများ (85.2 Kb)
Kid-Key-Lock 2.1 | 1.41 MB
Advanced SystemCare Pro 5.3.0.246 Final | 25.76 MB
Internet Download Manager 6.11 Build 8 Final & Ret...
AoA Audio Extractor Platinum 2.3.5 | 7.63 MB
Vista Shortcut Manager (1.7MB)
Jumbofiles မှ ဒေါင်းလော့ဆွဲနည်း